Imikhiqizo Abakhiqizi nabahlinzeki - China Imikhiqizo Factory
Ukuguqula Izakhi Zokudala
Carbon Yamamolekhula ngesihlungo (CMS)
Ama-catalysts wethu wokuthola kabusha ama-sulphur anganelisa zonke izinhlelo zakho zokusebenza ezihlobene. Ama-catalysts aphelele weqembu afaka phakathi izigaxa ezivamile ze-alumina based based catalysts, i-advanced alumina based clause catalyst, i-titanium-based clause catalyst, i-multi-function clause catalyst, i-oxygen scanvening clause catalyst.
Sinikela ngama-silica gels asetshenziswa kakhulu ku-PSA hydrogen processing nasekucubunguleni igesi yemvelo.
Ama-sieve ethu wamangqamuzana anganelisa izinhlelo zakho zokusebenza ze-Cryogenic air division units (ASUs) akhelwe ukuhlinzeka nge-nitrogen noma i-oxygen futhi kuvame ukukhiqiza i-argon, ukomiswa kwegesi yemvelo nokwenza ubumnandi, ukuhlanjululwa kwe-hydrogen ekusetshenzisweni kwe-PSA
Kuma-distillate ahlukile, ama-catalysts wethu we-serial hydrotreating anganelisa izinhlelo zakho zokusebenza ekuhlanzeni ukucutshungulwa kwe-HDS enjalo ye-naphtha, i-HDS ne-HDN ye-naphtha, i-HDS ne-HDN ye-VGO nedizili, i-HDS ne-HDN yephethiloli ye-FCC, i-HDS ye-VGO ne-ULSD
Sinikeza izikhuthazi ezigcwele ze-serial zokulungiswa okuqhubekayo kokucutshungulwa kwe-catalytic (CCR) kanye ne-semi-regeneration reforming catalytic processing (CRU) yezinhlelo zakho zokusebenza ongazikhethela ukuthola uphethiloli kanye nemikhiqizo ye-BTX.
Siphinde futhi sinikeze ama-catalysts we-serial neqembu asetshenziselwa ukucubungula amakhemikhali e-petrochemical and natural as chemalysts kanye ne-adsorbents ku-synthetic ammonia unit, iyunithi yokukhiqiza i-hydrogen, i-acetylene hydrogenation catalyst ku-PE processing, propane dehydrogenation catalyst, njalonjalo.
Ama-sieve ethu e-serial carbon molecular anganelisa konke ukucutshungulwa kwe-PSA nitrogen yakho ngokuhlanzeka okujwayelekile kwe-nitrogen (99.5%), ubumsulwa obuphezulu i-nitrogen (99.9%) kanye ne-ultra-high purity nitrogen (99.99%). Futhi, i-CMS yethu ingasetshenziselwa ukuhlanzwa kwegesi yemvelo negesi yamalahle.
Sinikeza izinhlobo eziphelele ze-alumina ukwanelisa uhlelo lwakho lokusebenza ngegesi ejwayelekile nokomiswa, ukucutshungulwa kwe-PSA. Ama-alumina catalysts njenge-adsorbents for Polymer production purifying (PE), CS2, COS kanye ne-H2S ukususwa, ukususwa kwe-HCl kusuka kumagesi, ukususwa kwe-HCl kusuka kuziphuzo ze-hydrocarbon, Omiswe, Ukuhlanzwa (okune-Multibed).
Amakhemikhali ethu acushiwe asetshenziselwa ukucubungula i-PSA hydrogen ekususeni amakhompiyutha e-C1 / C2 / C3 / C4 / C5 esitokweni sokudla, iMercury isusa ekuhlanzweni kwegesi yemvelo.
Rm, 102-104, Isakhiwo 1st, No.1008, DongChangZhi Rd,
Ucingo: + 86-021-5119 8971